Guyyaa dheengaddaa irraa jaqlabee wal waraansa polisoota liyyuu Hayilii fi jiraattota godina Harargee bahaa aanaa Qumbii jiddutti geggeeffamaa jiruun, namoonni kudha jaha yoo ajjeefaman -
Guyyaa dheengaddaa irraa jaqlabee wal waraansa polisoota liyyuu Hayilii fi jiraattota godina Harargee bahaa aanaa Qumbii jiddutti geggeeffamaa jiruun, namoonni kudha jaha yoo ajjeefaman
Poolisoonni Liyyuu Hayil kun wayta adda addaattii daangaa Oromiyaa seenuun tarkaanfii ajjeechaa raawwataa kan turan yoo ta u, ammas haala hamaa ta een namoota nagaa ajjeesaa jiran.
Lola geggeeffamaa jiru kana jalaa jiraattoonni hundi qe ee isaanii gadi dhiisanii baqatanii jiru.
Lolli jiraattota aanaa Qumbii irratti baname kun guyyoota sadii dura kan jalqabe yoo ta u, haga ammaatti akkuma itti fufetti jiraachuullee jiraattoonni dubbatan.
Lola ta e kanaan namoonni kudha jaha poolisoota liyyuu Hayiliin kan ajjeefaman yoo ta u, haga ammaatti reeffi namoota kudha shanii awwaalamee jira.
Qabeenyi hedduun nu jalaa samaamee jira. Qe ee dhaloota keennaa dhiifnee lubbuu keennaan baqachuuf ammoo dirqamnee jirra jedhan.
Bakki lillo kun ammaan kana haalaan jabaatee itti geggeeffamaa jiru aanaa Qumbii naannawa magaalaa Minoo akka ta es namni kun himanii jiru.
Haalli ammaan kana muldhataa jiru hedduu yaaddessaa ta uu kan nuuf himan namni kun, keessumattuu wayta poolisoonni naannoo shanii duula hamaa nurratti geggeessaa jiranitti, poolisoonni Federaalaa daanagaa lamaan jidduu jiran ammoo qaamota mootummaan nutti bobbaasee kanaaf tumsa ta anii jiru jedhan.
Lola guyyoota sadiif geggeeffamaa jiru kanaan poolisoonni kun lafa baldhinni isaa kiilo meetira 40 ta u daangaa Oromiyaa ufi jalatti dhuunfatanii jiru.
Lola geggeeffamaa jiruun ammoo namoonni hedduun qe ee isaanii irraa baqatanii jiran.
Wayta gara garaatti milishoonni mootummaa Itiyyophiyaatiin gargaaraman kun daangaa godina Harargee bahaa seenuun duula jabaa geggeessaa kan turan yoo ta u, inni ammaa kun haalaan yaadessaa ta uullee jiraattonni himanii jiru.
Previous Ummanni Oromoo ABO malee Bilisummaa Fiduu Ni Danda’a, ABO’n Garuu……..
Next Oromo TV: Qumbii Ona Oromoo Anniyyaa Lafa soomalitti ida’uudhaaf Lola oofaa jirti